20 “Na ɔsoro ahenni te sɛ onipa bi, ofiewura bi a ofii adi anɔpatutuutu sɛ ɔrekɔhwehwɛ apaafo akɔ ne bobeturo mu.+ 2 Bere a ɔne adwumayɛfo no kae ma esii sɛ ɔbɛma wɔn da koro denare biako no,+ ɔde wɔn kɔɔ ne bobeturo mu. 3 Bere a ofii adi bɛyɛ dɔn a ɛto so abiɛsa* nso no,+ ohuu ebinom sɛ wogyinagyina gua so+ a wɔnyɛ hwee; 4 ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Mo nso monkɔ bobeturo no mu, na mɛma mo nea ɛsɛ.’ 5 Enti wɔkɔe. Ɔsan fii adi bɛyɛ dɔn a ɛto so asia*+ ne akron*+ kɔyɛɛ saa ara. 6 Afei bɛyɛ dɔn a ɛto so dubiako* no, ofii adi kohuu ebinom sɛ wogyinagyina hɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Dɛn nti na mugyinagyina ha da mũ nyinaa a monyɛ hwee?’ 7 Wɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Obiara mmɔɔ yɛn paa ntia.’ Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Mo nso monkɔ bobeturo no mu.’+ 8 “Eduu anwummere no,+ bobeturo wura no ka kyerɛɛ nea ɔhwɛ n’adwuma so no sɛ, ‘Frɛ adwumayɛfo no na fa wɔn akatua ma wɔn,+ efi nea otwa to so kosi nea odi kan so.’ 9 Bere a wɔn a wɔfaa wɔn dɔn a ɛto so dubiako no bae no, wɔn mu biara nyaa denare biako. 10 Enti, wɔn a wodii kan no bae no, na wosusuw sɛ wobenya pii asen saa; nanso denare biako akatua no ara na wɔn nso wonyae. 11 Wɔn nsa kae no wofii ase nwiinwii tiaa ofiewura+ no 12 sɛ, ‘Eyinom a wɔbaa akyiri yi yɛɛ adwuma dɔnhwerew biako pɛ; nanso woama wɔne yɛn a yɛyɛɛ adwumaden da mũ nyinaa ama owia ahye yɛn no anya pɛ!’ 13 Na obuaa wɔn mu biako sɛ, ‘Damfo, menyɛɛ wo bɔne. Ɛnyɛ denare biako na me ne wo kaa ho asɛm?+ 14 Fa wo de na kɔ. Mepɛ sɛ mema nea otwa to no sɛnea mama wo no ara.+ 15 Minni hokwan sɛ mede m’ade yɛ nea me ara mepɛ? Anaasɛ papa a mereyɛ+ nti na w’ani abere?’+ 16 Saa ara na akyikafo bedi kan na adikanfo aka akyi.”+ 17 Afei wɔnam kwan so rekɔ Yerusalem no, Yesu de asuafo dumien+ no kɔɔ nkyɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: 18 “Hwɛ! Yɛrekɔ Yerusalem, na wobeyi onipa Ba no ama asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no, na wobebu no kumfɔ,+ 19 na wobeyi no ama amanaman mufo ma wɔadi no ho agoru na wɔaka no mpire abɔ no asɛndua mu,+ na da a ɛto so abiɛsa no obenyan.”+ 20 Ɛnna Sebedeo+ mmabarima no maame ne ne mma no baa ne nkyɛn bɛkotow no srɛɛ no biribi.+ 21 Obisaa no sɛ: “Dɛn na wopɛ?” Ɔbea no kae sɛ: “Hyɛ ma me mma baanu yi mu biako ntena wo nifa na obiako nso ntena wo benkum wɔ w’ahenni mu.”+ 22 Yesu buae sɛ: “Munnim nea morebisa. Mubetumi anom nea merebɛnom no?”+ Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yebetumi.” 23 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nom de mobɛnom,+ na me nifa ne me benkum so tena no de, ɛnyɛ me dea na mede ama, na mmom ɛyɛ wɔn a m’Agya asiesie ama wɔn no dea.”+ 24 Bere a edu a aka no tee eyi no, wɔn ani beree anuanom baanu no so.+ 25 Na Yesu frɛɛ wɔn baa ne nkyɛn kae sɛ: “Munim sɛ amanaman sodifo no di wɔn so bakoma na atitiriw no di wɔn so tumi.+ 26 Nanso ɛnte saa mo mu;+ mmom obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛse mo mu no, ɔnyɛ ɔsomfo,+ 27 na obiara a ɔpɛ sɛ odi kan mo mu no, ɔnyɛ mo akoa,+ 28 sɛnea onipa Ba no amma sɛ wɔnsom no, na mmom sɛ ɔbɛsom+ de ne kra ayɛ agyede de agye nnipa bebree no.”+ 29 Afei bere a wɔrefi Yeriko+ no nnipakuw kɛse dii n’akyi. 30 Na hwɛ! bere a anifuraefo baanu a wɔtete kwankyɛn tee sɛ Yesu retwam no, wɔteɛteɛɛm sɛ: “Awurade, Dawid ba, hu yɛn mmɔbɔ!”+ 31 Na nnipakuw no teɛteɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ dinn; nanso afei koraa na wɔmaa wɔn nne so kɛse kae sɛ: “Awurade, Dawid Ba, hu yɛn mmɔbɔ!”+ 32 Enti Yesu gyinae, na ɔfrɛɛ wɔn kae sɛ: “Dɛn na mopɛ sɛ meyɛ ma mo?” 33 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ma yɛn aniwa mmue.”+ 34 Ɛyɛɛ Yesu mmɔbɔ ma ɔde ne nsa kaa wɔn aniwa,+ na ntɛm ara wohuu ade, na wodii n’akyi.+
^ Bɛyɛ anwummere 5.